एलईडी इलेक्ट्रॉनिक ठूलो स्क्रिनको वास्तविक चमक अनुक्रमणिका न्याय गर्नुहोस् - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
एलईडी इलेक्ट्रॉनिक ठूलो स्क्रिनको वास्तविक चमक अनुक्रमणिका न्याय गर्नुहोस्
को आवृत्ति वृद्धि संग एलईडी डिजिटल स्क्रीन हाम्रो जीवनमा, एलईडी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल भिडियो भित्ताको अपरेशन र मर्मतका लागि माग पनि बढेको छ. बजारमा बेचिएको नेतृत्वको पर्खालहरूको लागि एलईडी प्रकाश-उत्सर्जक बत्तीहरूको गुणस्तर पनि असमान छ, र चमक ग्यारेन्टी छैन. विभिन्न स्टोरहरूमा चमक १ marked००-१-16०० एमसीडीको साथ चिह्नित धेरै प्रकाश उत्सर्जक डायोडहरू चिह्नित चमकमा पुग्न सक्दैन, त्यसोभए उनीहरु घिनलाग्दो छन्. घटनाले उपभोक्ताहरूलाई धोका दिन्छ. धेरै व्यक्तिको एलईडी प्रकाश प्रकाश उत्सर्जक ट्यूबको चमक पहिचान गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन. त्यसकारण, व्यापारी भन्छन् कि चमक नै ब्राइटनेस हो. चमकको आकार ठूलो भन्दा राम्रो छैन, तर ग्राहकको आवश्यकता अनुसार, उपयुक्त चमकले अप्रत्याशित परिणामहरू प्राप्त गर्दछ.
1. नेतृत्वित इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको चमक कसरी पहिचान गर्ने?
1. यसलाई आफैंमा एक 3V DC पावर सप्लाई बनाउनको लागि बनाउनुहोस् जुन प्रकाश उत्सर्जक डायोडसँग जडान गर्न सजिलो छ, प्राथमिकता ब्याट्री को उपयोग गरेर. तपाईले दुई बटन ब्याट्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई एउटा सानो प्लास्टिक ट्यूबमा राख्नुहोस् र दुई प्रोबलाई सकारात्मक र नकरात्मक परिणामहरूको रूपमा नेतृत्व गर्नुहोस्. अन्त सिधा शि्रनेलको साथ स्विचमा गरिन्छ. जब प्रयोगमा छ, सकारात्मक र नकरात्मक प्रोबहरू प्रकाश-उत्सर्जक डायोडको सकारात्मक र नकारात्मकसँग मेल खान्छन्. नकारात्मक पिनमा, थिच्नुहोस् र अन्तमा स्विच समाउनुहोस्, र प्रकाशयुक्त ट्यूबले प्रकाश उत्सर्जन गर्दछ.
2. दोस्रो कुरा, एक प्रकाश रोक्ने मीटर र एक डिजिटल मल्टिमिटरको संयोजन गर्नुहोस् एक साधारण प्रकाश मीटरि। उपकरण बनाउने. दुई पातलो तारको साथ फोटोरिस्टर लिड गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई डिजिटल मल्टिमिटरको दुई पेनमा सिधा जडान गर्नुहोस्. मल्टिमिटर २०K स्थितिमा राखिएको छ (फोटोरोसिस्टरमा निर्भर गर्दै, सकेसम्म पढ्ने लाई सत्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस्). नोट गर्नुहोस् कि मापन गरिएको मान वास्तवमा फोटोरोसिस्टरको प्रतिरोध मान हो, त्यसैले उज्यालो उज्यालो, सानो मान.
3. एक LED प्रकाश-उत्सर्जक डायोड लिनुहोस् र माथिको 3V प्रत्यक्ष वर्तमान प्रयोगको लागि यसलाई प्रकाश दिनुहोस्. प्रकाश उत्सर्जक हेड सामना गरीरहेको छ र जडान गरिएको फोटोरोसिस्टरको फोटोसेन्सिटिभ सतहको नजिक छ. अहिलेको समयमा, मल्टिमिटरले एलईडीको चमक छुट्याउन पढ्दछ.
2. चमक भेदभाव स्तर छवि को अन्धकार देखि सेतो को उज्यालोपना को स्तर को बुझाउँछ जुन मानव आँखाले छुट्याउन सक्छ.
एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिनको खैरो स्तर धेरै उच्च छ, जुन पुग्न सक्दछ 256 वा पनि 1024. तथापि, मानवीय आँखाको चमकमा सीमित संवेदनशीलताको कारण, यी खैरो स्तरहरू पूर्ण रूपमा चिन्न सकिदैन. त्यो भन्नु पर्ने हो, यो सम्भव छ कि ग्रे स्केल मानव आँखाहरूको धेरै सान्दर्भिक स्तरहरू उस्तै देखिने. यसबाहेक, आँखाको फरक क्षमता व्यक्तिमा फरक हुन्छ. प्रदर्शन स्क्रिनको लागि, मानव आँखा पहिचानको उच्च स्तर, राम्रो, किनभने प्रदर्शित छवि सबैको पछि हेर्नको लागि हो. अधिक चमक स्तर जुन मानव आँखाले छुट्याउन सक्छ, प्रदर्शनको र the स्पेस ठूलो, र रिच र colorsहरू प्रदर्शन गर्ने सम्भावना अधिक. विशेष सफ्टवेयरको साथ चमक भेदभाव स्तर परीक्षण गर्न सकिन्छ. साधारणतया, प्रदर्शन स्क्रिन पुग्न सक्दछ 20 स्तर वा अधिक, जे भए पनि यो राम्रो स्तर हो.
3. चमक र अवलोकन कोणको लागि आवश्यकताहरू:
इनडोर पूर्ण रंगको एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको चमक 800cd / m2 भन्दा माथि हुनुपर्दछ, र आउटडोर पूर्ण-रंग स्क्रिनको चमक प्रदर्शनको सामान्य सञ्चालन सुनिश्चित गर्न १ 15००cd / m2 भन्दा माथि हुनुपर्दछ।, अन्यथा प्रदर्शित छवि स्पष्ट हुनेछैन किनकि चमक पनि कम छ. ब्राइटनेसको आकार मुख्यतया LED डाईको गुणस्तर द्वारा निर्धारण गरिन्छ. हेर्ने कोणको आकारले प्रत्यक्ष एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन दर्शकहरूको संख्या निर्धारण गर्दछ, त्यसोभए ठूलो त्यत्ति नै राम्रो. अवलोकन कोण मुख्य रूपले डाइ प्याकेज द्वारा निर्धारण गरिन्छ.
एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको चमक निर्धारण गर्न यो धेरै आवश्यक छ. शहरी प्रकाशको लागि LED इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको हालको चमक आवश्यकताहरू, वा नयाँ नियमहरु, एलईडी स्क्रीनको चमक धेरै नै छ, यसले नजिकका बासिन्दाहरूलाई समस्या निम्त्याउँछ. खराब प्रतिक्रियाहरूबाट बच्नको लागि, यसको लागि व्यवसायलाई प्रासंगिक पेशेवर ज्ञान हुन आवश्यक पर्दछ जब एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनहरू अनुकूलित र मर्मत गर्दै.
विज्ञापनको लागि पारदर्शी एलईडी प्रदर्शन भित्ताको अनुप्रयोग क्षेत्र